To: मस्तिष्कको मलामी
हाङयुग अज्ञात - बुढो हुँदै गएपछि कम्युनिष्ट नेताहरूले भगवानप्रति आस्था राख्नु, बुढो हुँदै गएपछि व्यापारी, डाक्टर र इन्जिनियरहरूले साहित्य लेख्न थाल्नुलाई यसैको उदाहरण मानिन्छ। बुढो मस्तिष्कहरू नै देशका नीति-निर्माणमा हावी छन्, राजनीतिक दलहरू तिनै बुढो मस्तिष्कले सन्चालित छन्। युवा मस्तिष्कहरू वैदेशिक रोजगारका नाममा दास झैं बेचिएका छन्। नेपालमा भएका युवा मस्तिष्कहरू गजल र कविता लेख्नमा व्यस्त छन् (अर्थात् दाहिने मस्तिष्क चलाउन व्यस्त छन्), कि भने नेपाल बन्द गर्न प्रयोग भएका छन्। युवा मस्तिष्क जो रचनात्मक हुने गर्छ- त्यसको सही प्रयोग राजनीतिशास्त्रले बिल्कुलै गर्न सकिरहेको छैन।
रिकार्डो बोल्जान, भेनिस (इटाली) - हिजो राति विमानस्थल बाहिर उभ्याइएको फरक फरक लाइन त नेपाली र विदेशी भनेर पहिचानको आधारमा नभई कर्मचारीहरुले राष्ट्रियताकै आधारमा ‘यी हेप्न मिल्ने निर्धाहरु’ र ‘यी हेप्न नसकिने सचेत यात्रीहरु’ भनेर पो अलग पारिएको रहेछ। यसरी उही विमानमा उत्तिकै पैसा तिर्ने विदेशीलाई सोल्टी होटलमा लगियो भने नेपालीहरुलाई घटिया होटलमा र त्यसमाथि एउटै कोठामा पाँच छ जना खाँदेर सुत्न बाध्य पारियो।
तपाईंको नेताको जीवनशैली कस्तो छ?
श्रीकमल द्विवेदी - हामीले भोलिको समाज कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो आजको क्रियाकलापबाट निर्देशित हुन्छ। अभावग्रस्त हिंसात्मक समाज बनाउने कि समृद्ध शान्तिपूर्ण समाज बनाउने हाम्रै हातमा छ। आफ्नो कमजोरी सुधार्दै अझै सम्पन्न हुन खोज्ने कि आफूसँग नभएको कुराले वा अघिल्लो पुस्ताले भोगेको असमानता उचालेर दुःखी रहने? यो पनि हाम्रै हातमा छ।
सुजता अधिकारी - उपचार गराउन पैसा जुटाउने तनाब, बिरामी निको होस् भन्ने तनाव र अझ नेपालमा त छुट्टै अस्पतालले दिएको भागदौडको तनाव। यस्तो अवस्थामा कुरूवा नै बिरामी पर्न सक्छन्। मैले नर्सिंङ सकाएर काम गरेको दुई वर्षको अनुभवमा यस्ता थुप्रै कुरूवा देखेँ जो स्वयम् आफैं सिथिल भएर र कमजोरीका कारण बेहोस भएर लडे। यो देख्ता मन कुँडिन्थ्यो।
मानवी पौडेल - होटलमा प्रेमी–प्रेमिका होस् या श्रीमान–श्रीमती, महिला–पुरुष देख्नासाथ मिडिया साथै लगेर छापा मार्ने र थुन्ने काम सभ्य समाजका लागि पाच्य हुँदैन। राज्यले प्रहरी–प्रशासनको यस्तो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्छ।
सुधन सुवेदी - साना खुद्रे पसलहरु वा रेष्टुरेण्टमा पाउरोटी खाने झोले पर्यटक मात्र लगेर पर्यटन क्षेत्र उभो लाग्छ त? आजको भोलि प्रतिफल खोज्ने क्षेत्र पर्यटन होइन। पर्यटकलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने अवस्थामा हामी नभएका कारण अनुभव बेचेर प्रतिफल बढाउनुपर्ने अवस्था नेपाली पर्यटन उद्योगको छ। त्यसैले दिनहुँ जस्तो हुने जात्रा पर्वहरु, सय भन्दा बढी जातिहरुका धर्म, संस्कृति, संस्कारहरुलाई पर्यटनको भाषामा बेचेर लाभ लिन ढिलो गर्नु हुँदैन। विस्तृतमा
शिव प्रकाश - टिभी हेर्नेलाई हसाँउथे धुर्मुस–सुन्तली । हामी पनि हाँस्यौं होला । खुसी भयौं होला । काँचको पर्दामा हाँसो फुलाउने यी जोडीलाई बर्दिवासका मुसहरले टिभीमा देखेका थिए–थिएनन्? सधैं गरिबी, अभाव र पीडाले डामिएका ती मुसहरले कहाँ पाएर हेर्दा हुन् टीभी? रहर त कति हो कति हुँदो हो तर बाध्यता? बाध्यता र अभाबभन्दा ठूलो शत्रु के हुन्छ ?र, त्यही काँचका पर्दामा फुल्ने यो जोडीका रङ्गीविरङ्गी फूललाई ? मलाई लाग्छ, बर्दिवासका मुसहरले हाँस्न र खुसी हुन टीभी हेर्नु परेन। आफ्नो बस्तीमा पोतिएको खुसीको रङ् देखर हाँस्न थालेका छन्, अहिले ती। खुसीको रङ् कस्तो हुन्छ? कठीन छ उत्तर दिन। उत्तर खोज्न बर्दिवासको मुसहर वस्ती नै जानुपर्छ । जहाँ पोतिदै छ, त्यो रङ्।
मनोज पाण्डे - मंगली स्कुल किन नआएको भनेर म उसको भाइ सुजितलाई सोधिराख्थेँ। हिजो उसको भाइले मलाई भनेको थियो, “सर मंगली त अबदेखि स्कूल नआउने रे, सबैले सम्झाउँदा नि स्कुल जान्न भन्छे, अब तपाईं आफैं गएर बोलाउनु। ऊ त स्कुल कहिले नि नआउने भन्छे।" Comments
ताल्चा तोडेर एयरपोर्टमा गहना चोरिएपछि…
गिरीश गिरी - ‘नेपालको एयरपोर्ट भित्र चोरै चोर छन्,’ हिजोआज यस्तो भनाइ सबैले ब्यक्त गर्छन्, मेरो परिवार मात्र के कम होस्? सबैभन्दा ठूलो गल्ती त भाइ कै थियो। उसले सुनका गहना लगेजमा राखेको थियो। Comments
लक्ष्मी खनाल - नारीले समाज र परिवेशलाई हेरेर आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छे, श्रीमानको घरको सबै जिम्मेवारी लिनसक्छे भने एउटा पुरुषले विवाहपछि आफूलाई परिवर्तन किन गर्न सक्दैन? के श्रीमती घर सम्हाल्नका लागि मात्र हो त? जब नारीलाई अधिकार दिने कुरा आउँछ, त्यसबेला पछि हट्ने अनि घर सम्हाल्नचाहिँ फेरि नारी नै चाहिने?
जमुना वर्षा शर्मा - एकै परिवेश र एकै दैनिकीमा रहेकी उनले त्यो भन्दा बढी कसरी सोचुन्, बुझुन् र जानुन् । जुन संस्कार, परिवेश र दैनिकीमा आफूलाई अभ्यस्त बनाएकी छिन् त्यो भन्दा बढी जान्न बुझ्न र सिक्न नसक्नुमा उनीमात्रै दोषि पक्कै होइनन्। त्यो वातावरण नपाउनुमा उनको शिक्षा, चेतनास्तर, परिवार र समाज दोषी छ। त्यसैले उनले सोचेको सोचमाथि पनि दया लागेर आयो ।
लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अल्छीलाई ओखती हैन !
रमेश भट्टराई - ग्रेडिङको व्याख्याका पक्षमा घोत्लिँदा यसमा विद्यार्थी मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर नकारात्मक व्याख्याका शब्द भन्दा स्तरको व्याख्यामा जोड दिएमा राम्रो होला कि ? समग्रतः ग्रेडिङ प्रणाली सबै देशमा सक्षम नभएका कारण यसलाई देश र परिवेश अनुसार परिवर्तित फाँटमा राखेर नियाल्नु पनि आवश्यक भएको महसुस गर्न सकिन्छ।
भानु बोखिम - कोठामा ताल्चा लगाउनु भएको थिएन। खराब नियत राखेर फुपूको कोठा छिरेँ। फुपू सिरानीमुनि पैसा राख्नुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँबाट एक रुपैयाँको थोत्रो नोट निकालेँ। वास्वतमा यो चोरी काम थियो। चोरीको रकम लिएर अगाडिको किराना पसल पुगेँ अनि धुलो रङ किने। फर्केर रङको धुलो जगमा खन्याए अनि चापाकल पेलेर जग भरे। त्यसपछि म लुक्दैलुक्दै किशोरी ग्याङ भएतिर गएँ। यसपाली पुग्दा उनीहरु ताली बजाएर हिन्दी फिल्मको गीत गाउँदै थिए। मैले एउटीलाई ताकेर रङपानी पानी छ्यापेँ। त्यो केटी त मज्जैले भिजी। बाँकी सबैलाई रङपानीको छिटा प¥यो। त्यो रङपानी रेणुका दिदीलाई पनि प¥यो।
अशेष घिमिरे - हामीलाई थाह छ हाम्रो सपना न हिजो खराब थियो ,न आज नचाँहिदो छ। हामी सम्मानका साथ हरेक नागरिक मिलेर बस्न पाउने, राज्यले सामाजिक सुरक्षासहितको न्यायको प्रत्याभुति देओस्, हाम्रो सार्वभौमिकता अझ मजबुत बनोस्, संसारभरका न्यायका चाहानमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहोस्। गाँस बास कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगारको हाम्रो सपना आजपनि पवित्र छ। यो सपनामा साथ दिने के तिमी नै हौ त कमरेड?
कृष्ण महरा - पुनर्वास आनन्दबजारको समाधान कर्फ्यू हुँदै होइन, देश र मातृभूमीका रक्षक बर्दी विनाका सिपाहीहरुमाथी निषेधाज्ञाको डण्डा युद्व जितेर आएको सिपाहीलाई लात हान्नु हो। त्यसैले, विन्ती छ सरकार, गोविन्द गौतमको परिवारलाई भारत सरकारद्धारा क्षतिपुर्ती भराई न्याय दिलाइ पाऊ। Comments
भगवती पाण्डे - ‘तपार्इं भगवती पाण्डे हो?’ अपरिचित ल्याण्डलाइन टेलिफोनको नम्बरबाट मोबाइलमा आएको कल उठाउनासाथ उताबाट प्रश्न सोधियो, ‘तपाईंले मेरो बारेमा दुई दिन पहिले के लेख्नुभएको थियो? मलाई चिन्नुहुन्छ? म को हुँ? के गर्छु थाहा छ?’ Comments
मृगौला बेचबिखन: मानबेचबिखनको एक नयाँ स्वरुप
अधिवक्ता सतीश शर्मा - व्यक्तिगत आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि मृगौला बेच्ने कार्य कदापी आवश्यकता बन्नु हुँदैन। जोखिमग्रस्त समुदायहरुलाई अन्य अवसरहरुको खाँचो छ जस्तै न्यून दरमा ऋण, सिप सम्बन्धी तालिम्, उन्नत कृषि, बाख्रा गाई पालन तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमहरु गा.वि.स./न.पा.तथा अन्य संस्थाहरुले अभियानकै रुपमा संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दादलित महिला जनजाती तथा अन्य विशेष गरी गरिब समुदायलाई आर्थिक विकासको प्राथमिक लक्ष्यमा पारिनु पर्दछ।
मैले नजन्माएकी छोरी
ऋचा भट्टराई - भोलि मैले छोरी जन्माएछु भने, छोरीको हात डोर्याउँदै जाँदा कसैले, “अब छोरा चाहिँ कहिले पाउने?” भनेर कसैले सोधे म जवाफ नदिई बस्न सक्दिन। छोरीलाई काखमा राखेर माया गरेजस्तो गर्दै, “मामुलाई एउटा भाइ पाउनु भन त” भनेर मतिर हेर्दा मेरा बाल्यकालदेखिका सबै उत्तर उर्लेर आउँछन् होला। मेरी अमूल्य छोरीको बारम्बार अवमूल्यन भएको कल्पना गर्दै मलाई रिस उठ्छ।
मन्जुकुमारी शर्मा - नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार नेपालको राज्य संरचना केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ। यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संरचना पनि बद्लिने छ। आवश्यकताअनुसार अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्नेछन्। संविधानको अनुसुची ६मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीमा निजामती सेवा समावेश भएको छ। अनुसुची ८ ले स्थानीय तहलाई पनि यो अधिकार दिएको छ। संविधानका यी प्रावधानअनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै निजामति संरचना हुने छन्। Comments
डा. राजेश राई - हाम्रो जस्तो पहँुचमा भएका अधिकांश वन क्षेत्र समुदायको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा वन सम्वद्र्धन प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। अझ परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई समय सान्दर्भिक विज्ञान र बजारलाई आत्मसात् गर्दै परिस्कृत गराउँदै लैजानु वन प्राविधिकको मुख्य चुनौती हो। यसको लागि मौजुदा वन मन्त्रालयको संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
छम गुरुङ - खाना नलिनु अघिः -यो साउले खाना सोध्दा पुग्यो भने ‘आगायो’ भन् हे!-नपुगेको चैँ कसरी भन्ने?-‘चायो’ भन् न! मलाई फिटिक्कै खसकुरा नआउने। आखिरमा ‘आगायो’ के खाएर भन्न सक्नु ? बल्लबल्ल ‘चायो’ मेरो मुखबाट पाँच किलोको ढक जस्तो गरुङ्गो भएर सुस्तरी प्रक्षेपण हुन्छ। बाले अर्डर दिँदा भात मेरो लागि चैँ ‘हाफ’ भनेको हुन्छ। खाने बेला मैले ‘फुल’ पो खाइसक्छु, कारणः भात चामलको देखापर्छ।
नरेन्द्रकुमार नगरकोटी - मैलै जीवनमा धेरै बालबालिकाको कान निमोठेँ। कन्सिरीका रौं तानेँ। गालामा चड्कन लगाएँ। पाइपको लौरोले हत्केला बजाएँ। ढाड भाँचिएला जसरी हिर्काएँ। जबजब म बालबालिकालाई निरीह बनाउँदै शासकीय रवाफमा यी कार्य गर्थेँ म स्वयम् बिरामी पर्थेँ। त्यही दिन या भोलिपल्ट सम्बन्धित बालकसित भेटेर सम्बन्ध पुनसर््थापित भएको अनुभूति भएपछि मात्र आफूलाई सजिलो महसुस हुन्थ्यो।
सुरज सुवेदी - घाँटीमा अँगालो मारेर सुत्ने मेरो बानी थियो। बुवासँग सुत्दा पनि त्यसरी नै अँगालो मार्थेँ। उहाँलाई कहिल्यै झर्को लागेन। आमा आइरहन नपाउने। उहाँलाई लिन बुवा नै जानुपर्ने भएकाले चाँडै आँउने सम्भावना कम हुन्थ्यो। चाडपर्वजस्ता विशेष बेलामा मात्र हाम्रो भेट हुन्थ्यो। आमालाई लिन बुवा हिँडेदेखि आईपुगुन्जेलसम्मको पर्खाई सबैभन्दा लामो लाग्थ्यो मलाई। आमालाई सुनाउने धेरै कुराहरु सम्झिएर बस्थेँ म। सुनाउँछु भनेर सम्झिएका धेरै कुराहरु उहाँ नजिकै आईपुग्ने बेलामा हराउँथे।
शितल दाहाल - केटा मानिसको डिम्पलको वर्णन किन कसैले गर्न सकेनन्? केटाको गालामा भएको कोठीले म भुतुक्क भएँ भन्ने चर्चा किन कोही नारीवादी साहित्यकारले समते गरेनन्? मलाई थाहा छ यी तमाम मेरा प्रश्नहरुको उत्तर हामी सबैसँग छ। र त्यो उत्तर हो –केटा मानिस हेर्ने पात्र हो र हामी स्त्री जाति हेरिने पात्रका रुपमा समाजमा स्थापित छौं। हेर्ने पात्रले आफूलाई हेर्न चाहेको दृश्य वर्णन गरिदिए पुग्छ तर हेरिने पात्र तदअनुरुप बन्नुपर्छ। हेर्ने पात्रले चाहेको के हो त्यही जस्तो बन्न अभ्यास गर्नुपर्छ, नजानेको भए सिक्नुपर्छ ।
नवराज पराजुली - साँच्चै, हामी मर्दा कसैलाई केही फरक परेन भने हामी त कोहीसँग रिसाउन वा दु:खी हुन पनि नपाउने रहेछौं। जीवनभरि आशैआशमा बाँच्न बानी परेका हामी मृत्युबाट पनि आस गर्दा रहेछौँ है?
सौरभ कार्की - १५ पाथी मकै किन्न हिँडेको हर्कमान बाटोमा कसैसँग भेटे नबोली हिँड्न सक्दैन। बगरको बाटो एक्लै काट्न दिक्क लागिरहेको बेला एकजना मान्छे आइपुग्छ। तर ऊ मरिकाटे बोल्ने हैन। भाइ, दाइ र हाकिमको सम्बोधनले बोलाउँदा पनि ऊ नबोलेपछि अन्ततः हर्कमान त्यो मान्छेलाई गुरू थाप्न तयार हुन्छ। तर गुरू एकचोटी बोलेको एक रुपियाँ लिने सर्तमा मात्रै बोल्न तयार हुन्छ।
गजेन्द्र बुढाथोकी - ०६३ सालमा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा आएपछि आफ्ना करिब ७ सय कार्यकर्तालाई क्यासिनोहरूमा एकै पटक भर्ति गराए। त्यसअघि क्यासिनोमा एमाले समर्थित मजदुर युनियनको बोलाबाला थियो। क्यासिनो ‘सुकुलगुन्डा’को प्रवेश सहज थियो। सित्तैमा विदेशी रक्सी खान पाइने, युवतीहरूसँग सम्पर्क हुने भएकाले यस्ता ‘सुकुलगुन्डा’ पछि टोले गुन्डाहरूलाई लिएर जान थाले। क्यासिनोमा जुवाडेलाई लत लगाउन सुरुमा जानीजानी जिताइन्छ र पछि, पछि त्यो जुवाडे आफ्नो सर्वस्व हार्न थाल्छ। काठमाडौंका केही धनाढ्य सुरुमा रक्सी र युवतीका लागि जाने गरेकोमा पछि जुवाकै लत बस्न थाल्यो।
महासय! त्यो केटी कसले बिहे गर्छ?
यमुना अर्याल (काफ्ले) - हिजो तपाईँले पैसा तिरेर नगरकोटको होटलमा रात कटाएकी युवती यदि तपाईँकी छोरी हुन्थिन् र अरू तपाईजस्तै पुरुष पात्रले त्यसो गरेको हुन्थ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? तपाईलाई पिर हुन्थ्यो अब तपाईकी छोरीको कौमार्य कसैले भंग गर्दिसक्यो, कसैले थाहा पायो भने छोरीको बिहे हुँदैन। आफन्तले थाहा पाए भने थुक्छन्, यस्ती, उस्ती भन्छन् छोरी बिकाउनै सकस पर्थ्यो तपाईलाई तर कति ढुक्कसँग आफ्नै छोरी समानकी युवती लिएर मुड फ्रेसमा निक्कनु भा को महासय?
राम साह, पर्सा - हरेक जाति वा समुदायमा रहेका निराशावादीहरुले बुझून् - उनीहरु हौसला बढाउन सक्दैनन् भने निराश नबनाऊन्, सहयोग गर्न सक्दैनन् भने असहयोग नगरुन्, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैनन् भने विभाजन नगरुन्। हिमाल, पहाड र तराईलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न चाहने कुनै पनि युवाको बाटोमा तगारो नबनून्।